Video Editing Software များ - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Applications, Operating Systems & E-books » Applications
Video Editing Software များ
Applications နောက်ဆုံးပေါ် Windows Applications တွေကို ဒီမှာ ဒေါင်းလုဒ် ချနိုင်ပါတယ်။
27-11-2011, 09:55 PM
ပြန်စာ - Video Editing Software များ
322 kb ပဲရှိတယ်...စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
15-02-2012, 02:17 PM
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 + Patch
Vegas Pro 11 overview
The Vegas™ Pro 11 collection — Vegas Pro 11, DVD Architect™ Pro 5.2, and Dolby® Digital Professional Encoder — provides an efficient, intuitive and integrated content creation environment for video and broadcast professionals. Now featuring GPU-accelerated performance with OpenCL™-supported devices, Vegas Pro 11 powers through video processing and rendering tasks with ease. With innovative stereoscopic 3D tools, broad format support, unparalleled audio control, and GPU-ignited effects processing and rendering, the Vegas Pro 11 collection streamlines your workflow like never before. More Details >>
Microsoft® Windows Vista® 32-bit or 64-bit SP2, or Windows732-bit or 64-bit Not Support for Windows XP
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit)
For Windows Vista and Win7 (32 and/or 64-bit)
Sony Vegas Pro 11.0 Build 521 (64-bit)
For Windows Vista and Win7 (64-bit)
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 (32-bit) Mediafire
keygen DI v2.0
Password >> WWW.Myanmarfamily.Org
Sony Vegas Pro 11.0 နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးကို လိုအပ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 32-bit Version က 32-bit Windows ကော၊ 64-bit မှာပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 64-bit ကတော့ 64-bit windows တခုပဲ အသုံးပြုလို့ ရမှာပါ။
Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 ကို Install လုပ်ဖို့ကတော့ -
၁။ ပထမဦးဆုံး မိမိစက်မှာ Sony Vegas Pro ဗားရှင်းအဟောင်းတွေ တင်ထားသူများ ဗားရှင်းအဟောင်းကို Uninstall ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ထို့နောက် C:/ >> Program files >> sony ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကျန်နေသေးယင် အဲဒါကို ဖျက်ပါ။
၃။ ပြီးယင်တော့ Registry Editor ထဲကို သွားပါမယ်။ Registry ထဲကိုသွားဖို့ Run ( window key + r ) ကိုသွားပြီး regedit >> Ok ကို နှိပ်လိုက်ယင် Registry ထဲ ရောက်သွားပါမယ်။
၄။ Registry ထဲက အောက်မှာ ပြောထားတဲ့နေရာတွေက ဖိုဒါတွေကို Delete လုပ်ပါ။
HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Sony Creative Software
HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Sony Creative Software
HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Wow6432Node\_Sony Creative Software
HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Wow6432Node\_Sony Media Software
HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Wow6432Node\_Sony Creative Software
HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Wow6432Node\_Sony Media Software
တကယ်လို့ အဲဒီဖိုဒါတွေ မတွေ့ခဲ့ယင် ဖျက်စရာမလိုပါ။ နောက်တစ်ခု အဲဒီမှာ Sony နဲ့ ပက်သက်တာတွေပဲ ဖျက်ရမှာပါ။ တခြား Sony မဟုတ်တာတွေကို လုံးဝမှားမဖျက်မိစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖျက်မိယင် ကိုယ့်စက်မှာ ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
၁။ အထက်ပါဟာတွေ ပြီးယင်တော့ Sony Vegas Pro 11.0 Build 520 ကို Install လုပ်ပါ။ Install မလုပ်ခင် Antivirus ၊ AntiSpyware ၊ Firewall ...စတာတွေကို ခနလောက်ပိတ်ထားပါ။
၂။ Install လုပ်ပြီးသွားယင် Sony Vegas Pro ကို မဖွင့်ပဲ ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးယင်တော့ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ Keygen DI v2.0 ကို Copy လုပ်ပြီး C:\_Program Files\_Sony\_Vegas Pro 11.0 ထဲကို Paste လုပ်ပါ၊ အဲဒီထဲကနေ Keygen ကို Right Click >> Run as Administrator နဲ့ Run ပါ။
၃။ Keygen ပွင့်လာယင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Product Name နေရာမှာ 32-bit တင်ထားယင် Vegas Pro 11.0 (32-bit) Series ၊ 64-bit ကို တင်ထားယင် Vegas Pro 11.0 (64-bit) Series ကို ရွေးပေးပြီး Patch ကို နှိပ်ပါ။ နောက်ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာ Vegas Pro 11 ကို ရွေးပြီး Ok ကို နှိပ်ပါ။
၄။ နောက်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာတာမှာ Sony\_Shared Plug-Ins ကို ရွေးပြီး Ok ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒါဆို Patch လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Patch ပြီးယင်တော့ Keygen ထဲက Serial Number နဲ့ Activation/Authentiation Code - ၂ ခုကို Copy လုပ်ထားရပါမယ်။ Copy လုပ်ထားပြီးမှ Keygen ကို ပိတ်ပါ။ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါပြီးယင်တော့ အဲဒီထဲက Keygen ကို ဖျက်လို့ရပါပြီ။
၅။ အဲဒီအချိန်မှာ C:\_ >> Program Files >> Sony >> Shared Plug-Ins >> Audio ထဲကို သွားကြည့်လိုက်ယင် .bak နဲ့ဖိုင်တွေ အများကြီးတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒါဆိုယင် Patch လုပ်တာ အောင်မြင်ပါပြီ။ တကယ်လို့ မတွေ့ခဲ့ယင် Patch လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် မအောင်မြင်သေးပါ။ C:\_ >> Program Files >>Sony >> Vegas Pro 11.0 ထဲကို သွားကြည့်ယင်လည်း .bak ဖိုင်တွေ တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒါဆိုယင် Patch လုပ်တာ ပြီးပါပြီ။
အဲဒါတွေ ပြီးယင်တော့ Sony Vegas Pro 11 ကို Right Click >> Run as Administrator နဲ့ Run လိုက်ယင် အထက်ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Keygen ကနေ Copy ကူးထားတဲ့ Serial Number ကို ထည့်ပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။
နောက်တခု ပေါ်လာတာမှာ Register from another computer ကို ရွေးပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။ နောက်တခါ Next ကို ထပ်နှိပ်ပါ။
နောက်တခု ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြည့်ရမဲ့နေရာမှာ ထည့်ချင်တာတွေထည့်ပြီး (အမှန်ကို မဖြည့်ပါနဲ့) ၊ By Providing this information...etc.. ကို အမှန်ခြစ်ပြီး၊ Next ကို နှိပ်ပါ။ နောက်တခု Internet Shortcut ကို Save မဲ့နေရာမှာ နှစ်သက်ရာနေရာမှာ Save ပြီး Next ကို ဆက်နှိပ်ပါ။
နောက်တခု ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ Keygen ကနေ Copy ကူးထားတဲ့ Activation/Authentiation Code ကို ဖြည့်ပြီး Finish ကို နှိပ်ပါ။
အဲဒါဆို Sony Vegas Pro 11 ဟာ ပွင့်လာပြီး။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း License နဲ့ Full Version ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆို အားလုံးပြီးပါပြီ။ အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, gemini.zaw5687, zo
15-02-2012, 10:52 PM
တည်နေရာ: Port of Spain, Trinidad & Tobago
အပိုင်း (၈) နဲ့ (၉) ဒေါင်းလို့မရတော့လို့ တစ်ချက်လောက် ပြန်စစ်ပေးလို့ရမလားမသိဘူး .. ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအားလုံးဒေါင်းလို့ရပါတယ်... ကျေးဇူးပါ...
premiere_2.0.part01.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part02.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part03.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part04.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part05.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part06.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part07.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part08.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part09.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part10.rar (93.5 mb)
premiere_2.0.part11.rar (74.9 mb)
စုစုပေါင်း 1.09 gb ဖြစ်ပါမယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ gemini.zaw5687 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by gemini.zaw5687
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2012
ုkaraoke တွေမှာ စာတန်းထိုးတဲ့ software လေးကို လိုချင်ပါတယ်ခဗျာ
သီချင်းနဲ့စာသား တပြေးညီ ပြေးတာကို သုံးချင်လို့ပါ sony vegas / power director / premier pro /
သုံးလို့ရပါသလား မရလျင် တစ်ခြား software များကို ညွန်ကြားပေးပါခဗျာ
Find More Posts by ဇော်မင်းခိုင်
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Aug 2010
adobe premiere pro 2.0 portable
premiere_pro__portable.rar (58.4 mb)
မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြပါစေ ...
လင့်သေနေလို့ ပြန်တင်ပေးနိုင်ရင် တင်ပေးပါလားဗျာ
Find More Posts by myofamily
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Dec 2012
ပို့စ် 101 ခုအတွက် 327 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
[COLOR="Red"]သင် တစ်ရက်ကိုတစ်ခါတော့ ပြုံးဖြစ်အောင်ပြုံးပါ...[/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ငပေကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
g00gle, tu tu, zo
Find More Posts by ငပေကြီး
အခုလို မြန်မာမိသားစုဝင်ဖြစ်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ မြန်မာမိသားစုရဲ့ နွေးထွေးမှုတွေကြောင့် အရမ်းကြည်နူးမိပါတယ်။ သိချင်တာတွေအားလုံး
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှာ ဝင်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နေလင်းချို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by နေလင်းချို
Sony VegasPro 13 (64bit)
လင့်တွေ သေနေပြီဆိုလို. -
Sony Vegas Pro 13 (64bit) version ကို Mediafire ကနေ တင်လိုက်ပါရစေ။
ကျနေ်ာတင်လိုက်တာက 64bit အတွက်ပဲမို.လို. 32bit ကွန်ပြူတာတွေမှာတော့ သုံးလို.ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဖိုင်အရွယ်အစားက 300MB ကျော်လေးမို.လို. 50MB စီခွဲပြီး အပိုင်း(၇)ပိုင်းနဲ. ခွဲပြီး တင်ထားပါတယ်။
အထဲမှာပါတဲ့ guide အတိုင်း install လုပ်ပေးရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
28-05-2015, 12:28 PM
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 15 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ... ကျွန်တော် တကယ်လိုနေတဲ့အခါ မှာ ရလိုက်တဲ့ အတွက် တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ..ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Mr.Zero အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Mr.Zero
27-11-2016, 12:09 AM
Microsoft Windows ကွန်ပြူတာတွေမှာ ပါလာတဲ့ Windows Movie Maker လို အသုံးပြုရအရမ်းလွယ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ခုနောက်ပိုင်း နာမည်ရလာတဲ့ Wondershare ရဲ့ Filmora video editing software ကို စမ်းသုံးကြည့်ချင်သူများအတွက် ဒီနေရာမှာ mediafire နဲ့ ယူနိုင်ပါတယ်။ file size ကတော့ 109MB ရှိပါတယ်။အထဲမှာ full license ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ Keygen ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
င်္င်္Filmora ကတော့ Video Editing ကို စိတ်ဝင်စားပြီး စသုံးမယ့်သူတွေအတွက် အင်မတန်မှ သင့်တော်တဲ့ software ပါ။သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ windows movie maker ထက် ပိုမိုကောင်းမွန် များပြားပေမယ့် သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မို့ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပါတယ်။ win innwa font ကိုလည်း ထည့်သုံးနိုင်တာမို့ ဗမာလိုရေးလို့လည်း ရပါတယ်။
Last edited by zo; 27-11-2016 at 12:15 AM..
Torrent ဘာလဲ Torrent ဘယ်လဲ ?? KznT အထွေထွေဗဟုသုတ 27 06-04-2015 01:06 AM
Converter များမာတိကာ phoetharlay Applications225-08-2013 02:07 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 11:23 AM